वाम गठबन्धनको अग्निपरीक्षा ! - Naya Patrika
वाम गठबन्धनको अग्निपरीक्षा !
वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले पार्टी एकता भाड्न ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । वामदेव गौतमद्वारा लिखित ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तक विमोचनमा शनिबार एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्र सफल हुने नदिने दाबी गरे ।
एमाओ अध्यक्ष ओलीले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गरेको प्रस्तावको ओलीले खण्डन गरे । ‘त्यो प्रस्ताव माया गरेर देश बनाउन गरेको होइन, गठबन्धन भत्काउन, बिगार्ने षडयन्त्र हो,’ उनले भने ।
उनले जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरी सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सकेसम्म एकतापछि सरकारमा सामेल हुने नभए तालमेल गरेरै भए पनि सरकार बनाउने धारणा राखे । उनले भने, ‘जुनसुकै अबरोध आए पनि अबको सरकार वामपन्थी नेतृत्वमै बन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले देशमा स्थिरता, स्थायित्वबिना विकास सम्भव नभएको जिकिर गर्दै प्रदेश २ बाहेक वाम गठबन्धनको सरकार बनाएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने बताए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अवसर र चुनौतीबीच वाम गठबन्धन सरकार बन्न लागेको बताए । उनले भने, ‘अबको सरकारले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि दिनुपर्छ । यो वाम गठबन्धनको अग्निपरीक्षा पनि हो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सबैभन्दा धेरैले मतले जित्ने अपेक्षा गरिएका वाम गठबन्धनका वामदेव गौतम पराजित हुँदा नमीठो लागेको बताए । एमाले उपाध्यक्ष गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया १ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । उनले पैसा र विसंगतिको मारमा वामदेव परेको बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले देशलाई समृद्धिको अभियानमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति, पर्यटन विस्तार र ऊर्जाको विकास मूल आधार भएको उल्लेख गरे ।